Isoftware Njengesicelo Sezicelo Zesevisi
NgoLwesine, July 8, 2010 NgeSonto, uDisemba 4, i-2016 Douglas Karr
Lokhu okuthunyelwe kumnandi ngoba ngiyazazi zombili izinkampani ezithuthukise lezi izinhlelo zeziphakamiso… Futhi balapha e-Indiana! Mhlawumbe kuyinto yePurdue kuqhathaniswa neAnderson University! I-Sproutbox athuthukile Iyasebenza futhi Isayensi Studio usanda kukhishwa Okthoba (Phambilini i-TinderBox), womabili amasoftware njengezisombululo zesiphakamiso senkonzo yewebhu.
Esetshenziswayo yisisombululo sezindleko eziphansi, ukuqala ku- $ 19 kokuyisisekelo, $ 29 nge-pro kanye ne- $ 79 ngenyanga yeqembu. Kanye Highrise ukuhlanganiswa, kubonakala kunguhlelo olunekhono kakhulu lokwakha nokuthumela iziphakamiso zokuqukethwe ezinothile - kanye nokuqapha umsebenzi walowo ofinyelela isicelo.
Nayi ividiyo ehambisanayo yomkhiqizo wabo:
Njenganoma yini ethintwa yiqembu likaKristian, Okthoba ipholishwe kahle futhi iqoqa lapho kushiya khona i-Proposable. Iphakheji yezinga lokungena elethimba lokuthengisa ngo- $ 79 ngenyanga kanti amaphakheji akhula abe ngu- $ 999 ngenyanga kuya phezulu kumakhasimende e-Enterprise. I-Octiv nayo ine-module yokukhokha i-upsell nezinye izici ezihlukile.
Futhi ividiyo ye-Octiv:
Zombili lezi zicelo zinikela ngohlelo lokuxhumana ukuthola impendulo nokuqapha inqubekela phambili yesiphakamiso. Ngijabule ngamathuba azo zombili lezi zinhlelo Zokuhlongoza. Njengomsebenzisi ozinikele we Izincwadi ezintsha zokukhokha, Ngingathanda kakhulu ukubona ukuhlanganiswa kwalezi zinhlelo kuma-Freshbook! Izincwadi ezintsha zinohlelo lokulinganisela olunzima (uhlobo lohlaka lwe-invoyisi) olungathunyelwa kuklayenti futhi lubuyekezwe, kepha azinazo zonke izici zeProposable noma i-Octiv.
Siyakuhalalisela uKristian ngokukhipha lo mkhiqizo. Akungabazeki ukuthi yena nethimba lakhe bazophumelela ngakho! Ukuqina komkhiqizo kukaKristian kungenye yezinto ezihamba phambili emhlabeni. Ukube bengine-software njengomkhiqizo futhi ngiyifuna ibhalwe uphawu olufanele lokukhula kwebhizinisi, inkampani yakhe ibizohlala ingukukhetha kwami.
Tags: ukulandela ngomkhondo ukuguqulwaimibiko yefaneliisibiphakanyiswaukuhlaziywa kokugcinwaUkubika Komphakathi
Jul 8, 2010 ku-9: 22 AM
Siyabonga ngeTinderBox esho iDoug. Sethule i-beta emuva ngoJanuwari futhi sithole impendulo enhle yamakhasimende njengoba umkhiqizo uthuthukile. Sizogcina ukuphawula kwakho kweZincwadi Ezintsha!
Jul 8, 2010 ngo-3: 29 PM
Siyabonga ngokunqekuzisa kokuphakanyiswayo! Kuhle ukwazi izingcezu ezimbili zesoftware enkulu yokuphakanyiswa zakhiwe khona lapha e-Indiana!
Jul 8, 2010 ngo-3: 32 PM
Thanda, Doug! Konke okwenziwa yi-KA + A kuhle, kepha ngiyawathanda amandla we-Proposable's sales proposal builder and analytics. Ukubhala okuhle. Ngiyabonga!
Jul 8, 2010 ngo-3: 57 PM
Brad, sinenhlanhla yokuba nosomabhizinisi abakhulu kangaka esifundazweni. Ngiyayithanda yonke imikhiqizo ephuma ku-Sproutbox futhi inkampani ibimangalisa. Wenze kahle!
Jul 9, 2010 ku-8: 28 AM
UDoug: Siyabonga ngokubhala iposi elihle eliveze iTinderBox. Kusho okuningi ukuthi uthathe isikhathi ukubuyekeza lokho esihlanganisile. Sijabule kakhulu ngaleli thuba nangekhwalithi yokubambisana kwendawo.
Njengephuzu lokucaciswa - I-KA + A ebambisene ekwakhiweni kweTinderBox nabalingani bethu eGravity Labs, uDustin Sapp noMike Fitzgerald - izinkanyezi ezimbili zamatshe emphakathini wamabhizinisi wase-Indy.